Sei Hukama Dhiraivha Revenue Webinar Series | Martech Zone
Chitatu, June 27, 2012 Svondo, Kurume 24, 2013 Jenn Lisak Golding
Pakati pemwedzi waJune, shamwari dzangu nevatengi, Right On Interactive uye TinderBox, vakabatana kuti vagadzire inonakidza webinar akateedzana pamusoro pekuti hukama hunofambisa sei mari. Right On Inopindirana, anotsigira iyo Martech Zone, Inopa Kushambadzira kushandisa michina mhinduro nechinangwa chekuhwina, kuchengeta, uye kukura hukama. TinderBox ndeye SaaS online yekutengesa chikumbiro software izvo zvinoita kuti zvive nyore kugadzira multimedia, yakabatana yekutengesa mazano kune ako tarisiro. Vaviri vane ruzivo runoshamisa mune zvekushambadzira nekutengesa maindasitiri, ayo avakagovana mune ino webinar dzakateedzana.
Ichi chikamu chechitatu chikamu, chine tarisiro pane dzakasiyana zvikamu zvekushambadzira nekutengesa macircle mune yega yega 3 mineti webinar. Heano mamwe makiyi ekutora kubva kuchikamu chega chega, asi iwe unofanirwa zvirokwazvo teerera kune akateedzana kudzidza zvakawanda! Iwe unogona zvakare kutevera iyo hurukuro pa Twitter ne #kudzosera hashtag.
Chikamu 1: Kupenda Mufananidzo weTarisiro Yako
Heano mamwe epoindi ekukurukurirana uye kutora kubva kune ino webinar:
Ndiani waunofanirwa kushandisa nguva yako kutaura naye
"Kugamuchirwa kwemichina yekushambadzira michina inotarisirwa kuwedzera ne50% panosvika 2015." (Sirius Sarudzo)
"50% yevatungamiriri vanokodzera havana kugadzirira kutenga nekukasira." (Gleanster)
Shift kubva kukambani ichikuudza kuti dambudziko rako nderei kukubatsira kugadzirisa matambudziko awona
Sei kutungamira kutora kune zvakawanda nezve tarisiro
Hunhu pamusoro pehuwandu (zvinotungamira)
Kugadzira yakagadzirirwa, kutaurirana kwakakodzera
Kubvuma zvese zvinotungamira sosi dzekushandurwa kwakawanda
Matipi ekuti utange sei (zvinangwa, vatengi profiles, bhizinesi zvinotungamira)
Teerera iyo Part 1 pano.
Chikamu 2: Chikamu Chinotaura Nyaya
Kutaura nezve kuenzanisa kutengesa uye zvinangwa zvekushambadzira
Ita shuwa kuti handoff inotsvedza uye inoshanda uye inoshanda
"47% yevatengesi veB2b vanoti vanogona kuvhara zvishoma pane 4% yezvinhu zvese zvinotengeswa, kana kutomboziva metric iyi." (Forrester Tsvagiridzo)
"Vanhu vane mukana we12% yekutenga kubva kwauri kana iwe uchigona kugadzira kubatana kwemanzwiro." (Gallup Ongororo)
"Pakazosvika 2020, vatengi vachakwanisa 85% yehukama hwavo vasina kutaura nemunhu." (Gartner Tsvagiridzo)
Uchishandisa zvibodzwa kuziva uye kugona mukati
Zvikoro zvinofanirwa kuenderana nemhando dzakasiyana dzehukama
Nhanho yega yega inofanira kurapwa zvakasiyana
Iwo manhamba anopa nzwisiso kune iyo yese nyaya - iyo hupenyu hupenyu hwehukama
Teerera kuChikamu 2 pano.
Chikamu 3: Ngatitorei Iwe wega
"Vatengi veB2B vanosvika 70% kuburikidza nekutenga vasati vataura nevatengesi." (Sirius Sarudzo)
Kugadzirisa maturusi nehukama
Kutaura nezve isina musono handoff kubva kushambadzira kuenda kutengesa
Kuremekedza, Kukosha, Kupindura
Kukwezva, Kurera, Shandura (kutengesa / kushambadzira fanera uye kuti vari kuchinja sei)
Yakanyatso nyorwa ruzivo kune vatengi
Kushandisa tekinoroji kubatanidza nyika uye mukati
Dhata inotyaira shanduko
Deals padyo nekuda kwehukama
Nguva yekuwana yako pachako inotora 70% yenzira kuburikidza nemaitiro
Teerera kuChikamu 3 pano.
Tora nguva uye teerera kune izvi zvechokwadi zvinonakidza webinar akateedzana - hauzozvidemba!
Tags: kutauriranaMarketingKushambadzira WebinarRelationshipsRevenuekurudyi pane kudyidzanaKugonesa Kugonesatinderbox
Jun 27, 2012 pa 11: 41 PM
Chese chinozondibatsira kudzidza zvitsva
zvinhu zvinogamuchirwa zvakanyanya. Ndafara hangu
kuti wagovera ruzivo urwu. I
zvirokwazvo uchazviongorora. Ndinotenda ne
Jun 29, 2012 pa 9: 50 PM
PaSukritInfotech, isu tinoita shuwa kuti zvinangwa zvako zvekuvapo kwewebhu zvinogadziriswa zvizere kuburikidza nesevhisi yedu yakazara-kutenderera masevhisi. Masevhisi edu akakosha asi haana kuganhurirwa mukuvandudza software, webhu-based bhizinesi mhinduro, webhu application, uye portal Web Development Company. Iine mutengi-centric akazara-kutenderera maitiro uye rock-yakasimba domain ruzivo, yedu ine tarenda uye yakadzidziswa basa rebasa rinounza yega chirongwa nenguva kunyangwe ukuru uye kuoma.